SOM-Maxaadan Ogeyn Oo DF-SOMALIA Ka Diidday-Dowladda-Masar Dowladda ERITERIANA-Oggolaatay!!…Warbixin… | Allkisima.com
SOM-Maxaadan Ogeyn Oo DF-SOMALIA Ka Diidday-Dowladda-Masar Dowladda ERITERIANA-Oggolaatay!!…Warbixin…
Waxaa Qoray Admin on Apr 18th, 2017 and filed under Wararka Somaliya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
DF_SOMALIA Oo Dowladda Masar Ka Diidday Saldhig Millateri-1-JPG.
Muqdisho🙁Allkisima)-DF-SOMALIA ayaa iska diiday qorshe ay damacsaneyd dowladda Masar , kaasi oo ah in saldhig Militari ay ka dhisato SOMALIA iyo deegaannada G/Waqooyi Galbeed Ee La Magac-baxay S/land.
Dowladda Masar ayaa la sheegayaa inay dooneyso in ay cadaasi saarto dowlada Itoobiya oo ay isku qilaafsan yihiin Biyo xireenka Webiga Nile oo ay Itoobiya rabto inay hir galiso isla markaana ay ku bixineyso malaayiin doolar.
Dhanka Kale Wargeyska Sudan Tribune ayaa qoray inay Hoggaamiyayaasha Masaarida dhawaanahan culayska saarayeen dedaalka Diplomaasiyadeed si ay Dowladaha Gobalka, gaar ahaan Somalia, Djibouti uga heli lahaayeen Ballanqaad ku aadan inay Saldhig Milliteri iyo mid Ganacsi ka samaystaan dalalkaasi.
Wargeyska waxa uu qoray inkastoo ay Masar ku guul-daraysatay Qorshahasi waxay haatan ku guuleysatay inay Dowladda Eritrea ka helaan oggolaanshaha ay Saldhig Milliteri kaga samaysan karaan.
Kooxda Mucaaradka ee Qowmiyadda Cafarta ku kacsan Dowladda Eritrea ayaa shaaciyey in Dowladda Masar saldhig Milliteri laga siiyey Saldhigga Nora oo ku yaalla Jesiiradda Dahlak Island.
Saraakiissha Kooxda Mucaaradka oo lagu magacaabo “The Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), ayaa sheegay inay Dowladaha Eritrea iyo Masar kala saxiixdeen Heshiiskaasi, iyadoo ay Wafdi Heer Sare oo Masaari ah isbuucii hore booqdeen dalka Eritrea.
Waxasa xusid mudan oo La Sheegay in qiyaastii Ciiddamo tiradooda u dhexeyso 20,000 ilaa 30,000 oo Ciiddanka Badda Masaarida ay u-Daad–gureyn doonaan Saldhigga loo qorsheeyey, in massar ay ka weerarto ETHIOPIA waxaana arrinkaan laga soo xigtay Mucaaradka Eritrea.
Haddii uu qorshahaasi rumoobo, waxay Masar noqon doontaa dalkii 3-aad ee Carab ah ee Saldhig Milliteri ka dhista dalka Eritrea oo haatan ay saaran tahay Cunaqbataynta QM ee Hubka, kadib, markii lagu eedeeyey inay Hub iyo dhaqaale siiyaan Dhaqdhaqaaqa Alshabaab Somalia.
Haatan, Ciiddamadda Sacuudiga iyo kuwa Imaaraadka waxay Saldhigyo ku leeyihiin Degmadda Casab ee Eritrea, waxayna Isbhaysiga Sacuudiga ka qaadaan Duullaanka ka dhanka ah Kooxda Xuutiyiinta Yemen.
Dhinaca kale, Siyaasiyiinta Dowladda Ethiopia ayaa walaac xooggan ka muujiyey Danaha Masaarida ee ay ku hubinayaan inay Saldhigyo ku yeeshaan Geeska Afrika.
Dowladda Masaarida waxay ka baqaysaa Mashruuca Biyo-xireenka laga dhisayo Webiga Nile ee ay Ethiopia ku bixisay Balaayiinta Dollar.
Ugu dambeyntiina DF-SOMALIA ayaa dooneysa inaysan ku lug yeelan qilaafka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya, waxana muuqata in arintaas darteed ay sii kala fogaanayaan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Masar.